चर्चित अभिनेता प्रकाश राज चुनाव लड्दै ! [मोदीलाई हराउनु आफ्नो मिसन भएको टिप्पणी] - सुदूरखबर डटकम
चर्चित अभिनेता प्रकाश राज चुनाव लड्दै ! [मोदीलाई हराउनु आफ्नो मिसन भएको टिप्पणी]
मुम्बई । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीको कट्टर आलोचकको रुपमा चिनिएका बलिउड अभिनेता प्रकाश राज चुनाव लड्ने भएका छन् । विभिन्न फिल्महरुमा खलनायकको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रकाशले आफु लोकसभा चुनावमा उठ्न लागेका जनाएका हुन् । उनले एक ट्विट गर्दै आफू लोकसभा चुनावमा स्वतन्त्रबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका हुन । उनी बलिउड मात्रैं नभई टलिउडका फिल्महरुमा खलनायकको भूमिकामा प्रायः देखिन्छन्।
ट्विटरमा उनले नयाँ वर्षको शुभकामना दिदैं लोकसभामाआफू स्वतन्त्रबाट चुनाव लड्ने बताएका हुन् । प्रकाशले आफ्नो ट्विटमा’अब की बार जनताकी सरकार’ समेत लेखेका छन् । कुन क्षेत्रबाट उठ्ने भन्ने विषयमा उनले खुलाएका छैनन् । गत नोभेम्बरमा प्रकाशले मोदीलाई स्वच्छ भारत अभियान आफू र आफ्नो पार्टीका नेताहरुको बोलीबाटै पो सुरु गर्ने हो कि भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । प्रकाश राजले सलमान खानको ‘वान्डेट’, अजग देवगनको ‘सिंघम’मा खलनायकको रुपमा अभिनय गरेका छन् । एजेन्सी